ahlafuna ejeqeza amakhansela "asongelwayo" - Ilanga News
Home Izindaba ahlafuna ejeqeza amakhansela “asongelwayo”
ahlafuna ejeqeza amakhansela “asongelwayo”
Ohlwini kukhona nenyanga yodumo
INYANGA edumile “uDr Mkhulu” okuvela ukuthi ibalwa nabantu abazingelwayo ukuze basocongwe ngenxa yobufakazi ngokufa kwabantu KwaMhlabuyalingana.
AHLAFUNA ejeqeza amakhansela amabili kaMasipala waseJozini okubikwa ukuthi asatshiswa ngokuyiswa kwagoqanyawo nenyanga edumile eBhambanana, eKwaMhlabuyalinga, uMnu Mxolisi “Dr Mkhulu” Nkomonde.
Kuthiwa bangase basocongelwe iqhaza labo ebufakazini bokubulawa kwabantu abahlukele kuleya ndawo.
Kunezinkulumo eziqoshiwe okusongwa kuzona ukuthi kuzobulawa uMnu Nkomonde okuthiwa useqhulwini ohlwini lwabazoyiswa kwagoqanyawo uMnu Jabulani Mkhwamubi oyikhansela ku-ward 10 ngethikithi le-ANC noMnu Qedusizi Gumede ophethe u-ward 12 ngethikithi le-IFP.
ILANGA lizilalele izinkulumo eziqoshiwe lapho kubalulwa khona amagama ala makhansela, kuthiwa kufanele ashaywe ngokulandelana kodwa kuzokwenziwa ngosuku olulodwa.
Ekhuluma neLANGA uMnu Gumede uthe uqale ukuzwa ngokuthi kunetulo akhelwe lona emasontweni amabili adlule.
“Ngifonelwe ngumuntu wesifazane ongazichazanga ukuthi ungubani, engitshela ukuthi kufanele ngibheke lapho ngihamba khona ngoba sekuhlelwe konke ngokubulawa kwami. Uthe sezikhokhelwe nezinkabi okufa-nele ziqede ngami.
“Kuze kube yimanje sengiphila ngokuzivalela. Nokho-ke kusobala ukuthi ngifela ukugqugquzela ukuba kuhlanganwe ngesikhathi kutholakale isidumbu sengane okwabe sekuqanjwa amanga aluhlaza kwathiwa ishayiswe yimoto,” kusho uMnu Gumede.
UMnu Mkhwamubi, uthe ufonelwe ngomunye wosomabhizinisi bendawo wamtshela ukuthi uzomfuna aze amthole maqede amhlakaze ikhanda ngezulu lezandla.
“Lo muntu wafika kimi ezovuma ukuthi ushayise umuntu, kodwa isidumbu salowo muntu sasinezimpawu zokucwiywa. Kumanje ngiyazingelwa, ngihlala ngokuzivalela selokhu ngiqale ukusatshiswa yile ndoda.
“Bayangitshela nabantu akhuluma nabo ukuthi ufuna ukuqeda ngami ukuze kuzophela ngobufakazi enginabo. Angazi noma kufanele ngithule yini ekubeni kubulawa abantu ngamadoda nje asendaweni. Sekuyisikhathi eside kubulawa abantu maqede kuthuleke. Abantu banqunyiswa okwezi-nkukhu lapha endaweni,” kusho uMnu Mkhwamubi.
UDr Mkhulu yena uthi akazi noma wumona wabanye abelaphi yini noma ufela ukuthi uphethe ingxenye yobufakazi mayelana nesigameko sokubu-lawa kweduna yangakubo, uMnu Totoza Gumede, eyadutshulwa yabulawa ngabantu ababili mhla ka-14 kuNhlolanja (February) kophezulu.
“Ngikhuluma ngento eqoshiwe, amanye amaphimbo kuyezwakala ukuthi ngawobani. Umuntu oqale ukungazisa ukuthi igama lami lisekuqaleni ohlwini lwabantu okufanele bashaywe ngezulu lezandla lapha eBhambanana, uthe uzimisele ngoku-yofakaza noma ngabe kunini. Mina-ke ukufa ngikulindele ngezinhlangothi ezimbili.
“Kungabe kusukela kulo mona wethu sisodwa singabelaphi, okanye wukuthi ngiphethe ingxenye yobufakazi maqondana nesigameko sokuhlase-lwa kubulawe induna yalapha endaweni, uMnu Totoza Gumede. Ngizijubile ukuthi ngenze uphenyo maqondana nalesi sigameko, okuyilapho ngivuse lobu bufakazi engabuthatha ngabuyisa esiteshini samaphoyisa aseNgwavuma, kwathenjisa ukuthi kukhona okuzokwenziwa kodwa kuze kube manje, akwenziwe lutho.
“Amaphoyisa akulesi siteshi ahudula izinyawo kukhona konke esiwabikele khona maqondana nokubulawa komholi wendawo. Nakuba mina ngibona ukuthi angiphephile, kodwa nginovalo ngempilo yabantu abavuka ekuseni bazosebenza lapha kwami.
“Mina kangesabi muntu futhi ngazi kahle ukuthi mhla saqondana, kuyosala amadoda enkundleni, kangiwona umdlalo mina, ngiyindoda,” kusho uDr Mkhulu.
Uthi uqale ukuzwa ngodaba lokuthi kunetulo akhelwa lona emasontweni amathathu adlule. Utshele ILANGA ukuthi wafonelwa ngowesilisa osembonini yamatekisi emtshela ukuthi kunabesilisa abawu-4 abathe sebezame kaningi ukumthungatha ngezibhamu kodwa bangaphumelela.
IMeya yaseJozini, uMnu Delani Mabika, ithe umasipala wayo unezinhlelo ophezu kwazo zokuqinisela uMnu Mkhwamubi noMnu Gumede ezokuphepha ngoba nobufakazi bokuthi bayesatshiswa busobala.
“Ngemuva kokuba sibutholile ubufakazi, siqale izinhlelo, baqashelwe onogada. Basongelwa ngokubulawa, kungekudala bazobe sebegadwa ngoba kuwumgomo wethu siwumasipala ukuba siqinisekise ukuphepha kwamakhansela,” kusho uMnu Mabika.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, ukuqini-sekisile ukuvulwa kwamacala ama-thathu okusabisa, aphenywa esiteshini samaphoyisa aseNgwavuma. Uthe bekungakaboshwa muntu.
Previous articleuphayinaphu uzihambela wodwa ngokudayisa
Next articleinkombankombane ngodungunyane epulazini